ကက်ပီတိုလွှတ်တော်အဓိကရုဏ်း နှင့်ပတ်သက်၍ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ဆီးနိုတ် အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန် - Xinhua News Agency
ဝါရှင်တန်၊ ဇွန် ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်လွှတ်တော် ကက်ပီတိုအဆောက်အဦလုံခြုံရေးရဲအရာရှိတစ်ဦးအပါအဝင် လူ ၅ ဦးထိ သေဆုံးခဲ့ရသည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့သော လွှတ်တော်စီးနင်းခံရသည့် အဓိကရုဏ်းတွင် ထောက်လှမ်းရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ဆီးနိုတ်လွှတ်တော်က အင်္ဂါနေ့တွင် အစီရင်ခံစာသစ် တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ဆီးနိုတ်လွှတ်တော် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကော်မတီ နှင့် ဆီးနိုတ်လွှတ်တော်အမိမြေလုံခြုံရေး နှင့် အစိုးရစီမံခန့်ခွဲမှုရေးရာ ကော်မတီတို့က စာမျက်နှာပေါင်း ၁၂၇ မျက်နှာပါရှိသည့် သမ္မတအိမ်ဖြူတော်မှ မထွက်မီ ရက်ပိုင်းအလို ယခင်သမ္မတ(ဟောင်း) ဒေါ်နယ်ထရမ့်အပေါ် စွပ်စွဲပြစ်တင်သည့် ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကက်ပီတိုအဆောက်အဦ၌ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများစွာ၏ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များက အလေးဂရုပြုခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော တိုက်ခိုက်မှုများ နှင့် အဓိကရုဏ်းမှုများအတွက် အမေရိကန်ကက်ပီတိုလွှတ်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့(USCP)က ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်ထားခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ ကက်ပီတိုလွှတ်တော်အဆောက်အဦအတွင်းသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၆ က ထရမ့်ထောက်ခံသူများ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသည်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က တားဆီးနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
“ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာ အမေရိကန်ကက်ပီတိုလွှတ်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ကွပ်ကဲရေးစနစ် ပျက်စီးသွားတယ် ၊ ရှေ့တန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ရဲအရာရှိတွေဟာ လွတ်ထွက်လာတာတောင် အဓိက သတင်းအချက်အလက် ဒါမှမဟုတ် ညွှန်ကြားချက်တွေ မရရှိခဲ့ဘူး ။ ဌာနရဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်မတိုင်မီထိ USCP ကွပ်ကဲရေးမှူးတွေကို တရားဝင် သတ်မှတ်ချက်ပေးမထားဘူး၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေကိုယ်တိုင် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းမှာ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခဲ့ရတယ် ၊ ပြီးတော USCP ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ရှေ့တန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲအရာရှိတွေကို ချိတ်ဆက်အမိန့်ပေးဖို့ ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးစနစ်နဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့လည်း လုံးဝ မလုပ်ခဲ့ဘူး ” ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် ဗျူရိုကရေစီယန္တရားနှောင့်နှေးကျန့်ကြာမှုကြောင့် ယင်းနေ့က နောက်ထပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အခင်းဖြစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိရန် နာရီများစွာ အချိန်ယူခဲ့ရကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
“ ပျက်ကွက်ခဲ့တာတွေက သိပ်ကို ထင်ရှားပါတယ်၊ အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာတစ်ခုရှိတာက ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးစနစ်ပေါ်ကနေ ဘယ်အရာရှိတစ်ယောက်တစ်လေ ညွှန်ကြားချက်တွေကို ကြားခဲ့ရသလဲ ၊ ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်ရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုက ‘ တစ်ယောက်တစ်ယောက်မှာ အစီအစဉ်တစ်ခုခုရှိခဲ့လား’ ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ ၊ ဘယ်သူမှ မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး” ဟု ဆီးနိုတ်လွှတ်တော်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကော်မတီဥက္ကဌ လွှတ်တော်အမတ် Amy Klobuchar က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်သို့ လူအများအပြား မည်ကဲ့သို့လာရောက်ခဲ့သည်မှာ လွှတ်တော်အမတ်များအသုံးပြုသည့် ကက်ပီတိုလွှတ်တော်အဆောက်အဦ အဝင်အထွက်မြေပုံလမ်းညွှန်များကို အွန်လိုင်းမြေပုံပေါ်တွင် မျှဝေထားခဲ့ကြောင်း နှင့် အချို့ဆန္ဒပြသူများသည် လက်နက်များပါ တစ်ပါးတည်းယူဆောင်လာရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်မှာ ထင်ရှားကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
“ ကက်ပီတိုမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြောဆိုနေကြပေမယ့် FBI (ပြည်ထောင်စုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဗျူရို) ရော DHS (အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန)ပါ အကြမ်းဖက်မှုအတွက် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့တွေကို ထောက်လှမ်းရေးအစီရင်ခံစာပေးပို့တာ ဒါမှမဟုတ် ခြိမ်းခြောက်မှု ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့သတိပေးချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်တာမျိုး လုံးဝ မရှိခဲ့ဘူး ” ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှ ဂျိုးဘိုင်ဒန်၏ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို တားဆီးရန် အလို့ငှာ ထရမ့်အားထောက်ခံသော လူအုပ်ကြီးသည် ကက်ပီတိုလွှတ်တော်ထဲသို့ ချိုးဖျက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သော နှစ်ဖက်စလုံးပါဝင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် ဆီးနိုတ်၌ နှစ်ဖက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု မရရှိခဲ့သဖြင့် ပြီးခဲ့သောလတွင် လွှတ်တော်၌ တရားဝင်ကြိုးပမ်းမှု မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။(Xinhua)
WASHINGTON, June 8 (Xinhua) — The U.S. Senate on Tuesday issuedanew report highlightinganumber of intelligence and communication failures leading up to the Jan.6Capitol riot leaving five people dead, includingaCapitol police officer.-
“The failures are obvious. I think to me it was all summed up by one of the things in our report where one of the officers was heard on the radio that day asking the tragically simple question: ‘Does anybody haveaplan?’ Sadly, no one did,” said Senator Amy Klobuchar, chair of the Senate Rules Committee.
“Despite online calls for violence at the Capitol, neither the FBI nor DHS (the Department of Homeland Security) issuedathreat assessment or intelligence bulletin warning law enforcement entities in the National Capital Region of the potential for violence,” the report states.
The report came after the evenly split Senate failed to advancealegislation last month that would create an independent bipartisan commission to probe into the Jan.6attack whenamob of Trump’s supporters breached the Capitol to stop Congress from certifying Joe Biden’s election victory.
1- Supporters of U.S. President Donald Trump gather near the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States, on Jan. 6, 2021. (Xinhua/Liu Jie)
2- File photo taken on Jan. 6, 2021 shows Capitol Police reacting to the protesters’ invasion at the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. (Kevin Dietsch/Pool via Xinhua)